代表就任祝いのメッセージ | [JMFA]一般社団法人 日本ミャンマー友好協会
2022年2月28日 / 最終更新日 : 2022年3月1日 jmfa-staff お知らせ
代表　ウー　ソー・バ・フラ・テイン　様
2022年2月27日 一般社団法人 日本ミャンマー友好協会
Mr. Saw Ba Hla Thein,
Repressentative of the National Unity Government
First of all, I would like to express my deepest respect to you and your continuous efforts for democratization in Myanmar.
I would also like to express my sincere congratulations to you appointed as the Representative of the National Unity Government to Japan.
One year after the military coup, Myanmar lost its independence and democratic rights, and the loss of life and property of the people were increased. It is hoped that the appointment of you as the National Unity Government’s representative to Japan in suchadire situation will increase your capacity as well as efforts to fulfill these responsibilities. We look forward to your continuous success.
In order to achieve the success of the Myanmar Spring Revolution, the Japan Myanmar Friendship Association ready to cooperate with the National Unity Government and with Myanmar citizens in Japan as well.
We look forward to your guidance and cooperation.
Chairman Japan Myanmar Friendship Association
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၂၇ရက်။
မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ဦးစောဘလှသိန်း၏ အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု များအပေါ် များစွာ အထူးအလေးထားပါကြောင်း ဦးစွာဖော်ပြလိုပါသည်။
အလားတူ ဦးစောဘလှသိန်းအား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့်အတွက် လှိုက်လှဲစွာ ဝမ်းသာစွာ ဂုဏ်ယူပါကြောင်း ဖော်ပြလိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာသိမ်းပြီး တစ်နှစ်အကြာ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးခဲ့ ရပြီး ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဆုံးရှုံးရမှုများ ပိုမိုများပြားလာခဲ့ရပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ စံနစ်ဆိုး အခြေအနေတွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းရသည့်အတွက် ဦးစောဘလှသိန်းအနေဖြင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ အနေဖြင့် များပြားလာမည် ဖြစ်သည့်နည်းတူ ယင်းတာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် ‌ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြိုးစားမှု အစွမ်းအစများလည်း တိုးမြင့်လာနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ ထို့နည်းတူ စဉ်ဆက်မပြတ် အောင်မြင်မှု များ ရရှိနိုင်စေရန် မျှော်လင့်မိပါသည်။
မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်းအနေဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့်လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်လည်းကောင်း၊ အတူတကွ လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဆွေတော်၏ လမ်းညွှန်မှုများကို မျှော်လင့်မိပါသည်။
Representative of the National Unity Government Japan
第2回ミャンマー 鎮魂と世界の平和を祈る集い @増上寺 ハイライト版
「ミャンマー 鎮魂と世界の平和を祈る集い @増上寺」オンライン配信
第2回 ミャンマー 鎮魂と世界の平和を祈る集い at 増上寺
お詫び & 緊急ZOOMセッションのFull バージョン公開
一般社団法人ミャンマー祭り(Myanmar Festival Corporation)
ミャンマーの人々を応援する有志の会（Japan Volunteers for Myanmar）
SOSIA(Seeds Of Self-development In Asia)
ミャンマーの今を伝える会（Myanmar news now）
Copyright © THE Japan-Myanmar Friendship Association All Rights Reserved.